RCEP စတင်အသက်ဝင်လာခြင်းက ကုန်သွယ်ရေး ၊ စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများအတွက် မြှင့်တင်ပေးမည်ဟု စင်ကာပူ ကုန်သွယ်ရေး နှင့် စက်မှုဝန်ကြီး ပြောကြား - Xinhua News Agency
စင်ကာပူ ၊ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဆက်ဆံမှု(RCEP) သဘောတူညီချက် စတင်အသက်ဝင်လာခြင်းက စင်ကာပူနိုင်ငံ နှင့် RCEP အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ကုန်သွယ်ရေး နှင့် စီးပွားရေး ဆက်ဆံမှုများတွင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း စင်ကာပူနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး Gan Kim Yong က သောကြာနေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ကြေညာချက်တစ်စောင်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။RCEP စတင်အသက်ဝင်လာချိန်တွင် ယင်းသဘောတူညီချက်အား လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ရန်အတွက် များစွာသောစင်ကာပူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“RCEP သဘောတူညီချက်ဟာ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တစ်နှစ်ခန့်အကြာမှာတော့ စတင်အသက်ဝင်လာခဲ့သလို ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလကြားမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို နက်ရှိုင်းစွာချဲ့ထွင်ဖို့အတွက် ဒေသတွင်းရဲ့ ခိုင်မာတဲ့သန္နိဌာန်နဲ့ကတိကဝတ် သက်သေခံချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်” ဟု Gan က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ကို ချိတ်ပေးသည့် ပင်လယ်ဖြတ်ကျော် ရထားပို့ ဆောင်ရေး လမ်းကြောင်းမှတဆင့် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ချုံချင့်မှ စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ တင်ပို့မည့် ပထမဆုံး ကုန်စည်ရထားထွက်ခွာလာသည်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ကုန်စည်ရောင်းဝယ်ဖောက်မှုအတွက် ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် RCEP သဘောတူညီမှုစတင်အသက်ဝင်သည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ စတင်ကာ အခွန်စည်းကြပ်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ခံစားကြရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်သတ္တုလောင်စာများ ၊ ပလတ်စတစ် ၊ အခြားဓာတုထုတ်ကုန်များ ၊ ရွေးချယ်ထားသည့် RCEP ဈေးကွက်များတွင် အမျိုးမျိုးစားသောက်ကုန်များ နှင့် အဖျော်ယမကာများအပါအဝင် အထူးကုန်စည်များအတွက် ဦးစားပေးဈေးကွက်တင်သွင်းမှု နောက်ထပ် အထူးအခွင့်အရေးများလည်း ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရှင်းလင်းလွယ်ကူသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအစပြုမှုနှင့်အတူ ဒေသတွင်း စုစည်းမှုပြဌာန်းချက်များ ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ဦးစားပေးဈေးကွက်တင်သွင်းမှုအကျိုးရလဒ်များကို ပြုလွယ်ပြောင်းလွဲပုံစံဖြင့် ပို၍ ကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာ ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ကြောင်း နှင့် ဒေသတွင်း ပို့ကုန်ကွင်းဆက်အခွင့်အလမ်းကိုလည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
အချို့သောနယ်ပယ်များတွင် ရှိနှင့်ပြီးသား (အာဆီယံ+၁) လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက် ကတိကဝတ်များမှတဆင့် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ကို ရရှိနေသည့်အပြင် ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာသော ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပိုမိုခိုင်မာသေချာအောင် စီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ Xinhua)
RCEP’s entry into force to provide boost to trade, business ties: Singaporean minister
SINGAPORE, Jan.2(Xinhua) — The entry into force of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) will provideaboost to the trade and business ties between Singapore and the RCEP parties, said Singapore’s Minister for Trade and Industry Gan Kim Yong inapress release published on Friday.
He said that many Singapore businesses indicated that they were keen to utilize the RCEP Agreement when it enters into force during outreach events.
“That the RCEP agreement is entering into force aboutayear after it was signed, is testament to the region’s determination and commitment to deepening economic integration amidst difficult times,” Gan added.
According to the press release, businesses will be able to enjoy tariff elimination of about 92 percent for goods traded amongst signatory parties that have ratified the RCEP agreement from Jan. 1, 2022. They will also benefit from additional preferential market access for specific products including mineral fuels, plastics, other chemical products, miscellaneous food preparations and beverages in selected RCEP markets.
Businesses stand to benefit from enhanced commitments above existing ASEAN Plus One free trade agreements in some sectors, as well asamore transparent approach that would provide greater certainty for businesses, it added
Photo(1) Container ships are berthed along with the port at Singapore’s Pasir Panjang Container Terminal on Aug. 11, 2021. (Photo by Then Chih Wey/Xinhua)
Photo(2) The first train of the regular sea-rail transit route linking Chongqing Municipality in southwest China and Singapore is seen before departure in Chongqing, southwest China, on Sept. 25, 2017. (Xinhua/Tang Yi)
RCEP အသက်ဝင်လာပြီးနောက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအတွက် တရုတ်ကုန်တင်ရထား ထွက်ခွာ